Izinhlobo ze-Cherry | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo ze-Cherry
Izinhlobo ezinomsoco kunazo zonke ze-cherry elimnandi
Izihlahla zezithelo zezithelo zika Cherry azenzi nje kuphela umsebenzi ocebileyo, kodwa futhi zenza okuhle. Lezi zihlahla ezinamandla ezinezici ezicwebezelayo, ezikhanyayo ezihlaza okwesibhakabhaka zikhanya kahle kakhulu elangeni futhi zijabule amehlo ngama-shades ahlukahlukene ahlukahlukene avela e-yellow yellow kuya e-maroon, cishe emnyama. Mhlawumbe akuwona wonke umlimi owaziyo ukuthi lobu buhle baseningizimu bafika eYurophu ngaphambi kwenkathi yethu.
Izinhlobonhlobo ze-Cherry zeqembu eliphakathi
Ukuvulwa kwesithelo sehlobo sasehlobo kuqala nge-sweet cherry enhle. Kukholelwa ukuthi i-cherry enhle iyitshalo esithisa ukushisa elikhula kuphela ezindaweni eziseningizimu. Ukuhamba kwesikhathi, futhi isayensi ayimi. Ngenxa yomsebenzi ongenalutho wabalimi, lobuhle obuseningizimu buhlale buhlelekile ezindaweni zethu.
Izinhlobonhlobo ezinhle ze-cherry utamatisi
Izwe lakubo cherate utamatisi libhekwa njengeNingizimu Melika, noma kunalokho, izwe lasePeru. Igama elithi cherry lihunyushwe igama lesiNgisi elithi cherry, elisho ukuthi "cherry". Lezi utamatisi ziyakufanelekela ngokugcwele igama, njengoba zincane kunezinhlobo ezivamile zamatamatisi. Lezi tamatisi zibukeka zikhangayo futhi sezijwayelene kakade nabalimi bethu.
Ubusika-obuqinile futhi obunayo: incazelo kanye nezici sweet cherry izinhlobo "Fatezh"
Ngezinye izikhathi awufuni ngempela ukuthenga cherry (cherry bird) e-bazaar, ngoba akekho owazi kahle ukuthi kuphi futhi ngaphansi kwaziphi izimo lezi zithelo zazikhule. Ngakho-ke, abalimi abaningi bafuna izinhlobo ezinjalo zama cherry, okungahlinzeka isivuno esihle esifundeni saseMoscow nakwezinye izindawo eziphakathi nendawo enyakatho-ntshonalanga. Ababelethi banakekele lokhu, futhi maduzane izinhlobo ezihlukahlukene zalesi sihlahla zavuthwa - ama-cherry e-Fatezh.
Sweet Cherry "Ovstuzhenka": izici, impova, izimfihlo zokulima ukuphumelela
I-Sweet Cherry "i-Ovstuzhenka" iyinhlobo ehlukahlukene ethandwa. Incazelo yalo ayishiyi indiva, njengoba isihlahla sinomkhiqizo omuhle, ukubekezelelana okuhle kwezulu elibandayo kanye nokunambitheka okuhle kakhulu. Umlando wokuzalanisa "i-Ovchuzhenka" yizinhlobonhlobo zakuqala ze-cherry enhle, enezithelo zesikhathi sokuvuthwa esiphakathi.
I-Chermashna Cherry: izici, izinzuzo nezingozi
Namuhla, abathandi bama cherries abomvu abomvu nabomvu-oluhlaza okwesibhakabhaka bangajabulela ukunambitheka okungenakulibaleka kwamakhanki abo - amajikijolo aphuzi. Kunezinhlobo eziningi zemithi yezithelo eziphuzi, ngakho-ke sizocabangela enye yezintandokazi kakhulu - i-Chermashna sweet cherry. Cabanga ngezici eziyinhloko zezinhlobonhlobo ze-dessert, futhi thola ukuthi le sweet cherry ikwazi kanjani ukunqoba indawo yabalimi abanolwazi.
Cherry "Julia": izici, izinzuzo nezingozi
I-cherry enomnandi "uJulia" ngumuthi omude omude onentshalo ekhangayo futhi enhle kakhulu, iyathandwa kakhulu phakathi kwabalimi bezindawo ezisenyakatho kanye nesifunda se-Black Earth. Ukukhethwa kwe-Yulia cultivar kwatholakala esiteshini sokuhlola esiteshini saseRossosh (esifundeni saseVoronezh) esivela emzalweni wezitshalo ezibomvu zendawo yaseGin ngemuva kokuvota impova ne-cherisson yaseDenenen ephuzi.
I-sweet cherry ehlukahlukene "Valeriy Chkalov": isici
I-sweet cherry ingenye yamajikijolo okuqala ehlobo okwakulindelwe isikhathi eside ngemva kwebusika. Kodwa hhayi kuzo zonke izifunda ithela izithelo ngokulinganayo kahle. Ngakho-ke, kufanele uqaphele ngokukhethekile izinhlobo zama-berries ezinobusika-obuqinile. Omunye wabameleli balezi zinhlobo ngu-Valery Chkalov, i-cherry enhle. Umlando wokukhiqiza i-cherries "i-Valery Chkalov" itholakala ngendlela yokukhethwa mahhala eminyakeni engamashumi ayisikhombisa ekhulwini lama-20.
I-sweet cherry "I-pink pearl": izici, izinzuzo nokungalungi
I-sweet cherry iyinkimbinkimbi yemvelo eminingi, equkethe zonke izinto ezidingekayo nezimboni ezibalulekile zomsoco. Abaningi bethu bajabulela leli berry ngenjabulo ekhethekile, ngoba izithelo aziphilile kuphela, kodwa futhi zihle kakhulu. Ukukhethwa kwanamuhla kwanikeza ithuba lokutshala ama cherry kokubili ezindaweni eziseningizimu nezisezingeni eliphansi, okuhlinzekwa ngempumelelo yizinhlobonhlobo ze "Pink Pearl".